पुन: प्रयोग र प्रयोग गर्न सुनको सुन कहाँ छ
तपाईं कहाँ गोल्ड पत्ता लगाउनुहुन्छ?
पुन: प्रयोग र प्रयोग गर्न सुनको खोजी कहाँ
स्वर्ण यी केहि शुद्ध तत्वहरु मध्ये एक हो जसको लागी तपाईं शुद्ध मौलिक रूप मा यो शुद्ध सुनको न्युजेट जस्तै स्वाभाविक रूप देखि खोज सकते हो। मारिया बेबिकोवा, गेती छवियाँ
स्वर्ण रंगको एक मात्र तत्व हो जसले यसको नाम भाडा दिन्छ। यो एक नरम, नुस्खा धातु हो जुन गर्मी र बिजुली को उत्कृष्ट कंडक्टर हो। यो एक महान धातुहरु पनि हो, जसको मतलब यो गहिराई को प्रतिरोध गर्दछ, यो गहने को लागि सुरक्षित र यहां सम्म कि खाने को लागि (सानो मात्रा मा)।
जबकि सुनको लागि निश्चित रूपमा पक्कै सम्भव छ, तपाईं सुनको हुन सक्नुहुने सबै दैनिक वस्तुहरूमा अचम्म लाग्न सक्छ। यहाँ सुनको खोजी गर्न ठाउँहरूको सूची यहाँ छ। तपाई यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई पुन: प्रयोग गर्नुहोस् वा यसलाई बेच्नुहोस्।
कम्प्युटर र स्मार्टफोन्सबाट सुन प्राप्त गर्नुहोस्
कम्प्युटर प्रोसेसरहरू सुनको राम्रो स्रोत हुन्। जो ड्राइस, गेट छवियाँ
यदि तपाइँ यो लेख अनलाइन पढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईले एउटा वस्तु प्रयोग गर्नुहुने महत्त्वपूर्ण रकम समावेश गर्दछ। कम्प्यूटर, ट्याबलेट र स्मार्टफोन्समा प्रोसेसर र कनेक्टरहरू सुन प्रयोग गर्छन्। तपाईं सुनमा चलचित्रहरू, गेमिंग कन्सोलहरू, मुद्रकहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ ... कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक। सानो ज्ञानको साथ, तपाईं यो सुन पुनर्प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, हुनत म तपाईंलाई YouTube मा खोज्न को लागी विवरण दिन्छु, किनकि प्रक्रियामा सामान्यतया एक कुरकुराको लागि इलेक्ट्रोनिक्स जलाइएको छ र सुनलाई सिडाइड वा एसिड प्रयोग गर्न को लागी सुन गर्न को लागी। यो विशेष गरी पर्यावरण अनुकूल छैन, तर यो प्रभावकारी छ।
अब, तपाईं आफैलाई सोध्न सक्नुहुन्छ किन तांबा भन्दा सट्टाको प्रयोग गरिन्छ, सुनको सट्टा, जो अधिक किफायती, वा चाँदी हो, जुन उत्तम विद्युत कंडक्टर हो। कारण यो छ कि तांबे साँच्चिकै कार्यको लागि होइन, चाँदी चाँडो सँगै छिटो हुन्छ। धेरै भन्दा इलेक्ट्रोनिक्स केवल केहि वर्ष पछिदेखि नै, चाँदी प्रयोग गर्ने तिर एक प्रवृति हो, त्यसैले यदि तपाईं सुन पछि हुनुहुन्छ, यो नयाँ भन्दा पुरानो इलेक्ट्रोनिक्स प्रयोग गर्नु राम्रो हो।
सुनको डिटेक्टरहरूमा सुन
केही धूम्रपान डिटेक्टरहरूले सुन समावेश गर्छन्। एडवर्ड श, गेट छवियाँ
तपाईंले पुरानो धुआं डिटेक्टर बाहिर फाल्नु अघि, तपाईं यसलाई सुनको लागि जाँच गर्न चाहानुहुन्छ! धेरै धूम्रपान गर्ने डिटेक्टरहरूले तपाइँलाई पुन: प्राप्त गर्न सक्ने अर्को रोचक तत्व समावेश गर्दछ: रेडियोकर्मी अमेरिकी । अमेरिकियमले सानो रेडियोधर्म प्रतीक लिनेछ, त्यसैले तपाईलाई थाहा छ कि यो कहाँ छ। सुनको रूपमा तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ।
प्रयुक्त कारहरुमा गोल्ड खोज्नुहोस्
एक मोटरमा धेरै स्थानहरूमा सुन हुन्छ। मर्टेन स्निजर्ड्स, गेट छवियाँ
कारको तपाईंको पुरानो कङ्कर हटाउन अघि, सुनको लागि जाँच गर्नुहोस्। अटोमोबाइलमा धेरै स्थानहरू छन् जुन सुन समावेश हुन सक्छ। नयाँ कारहरू ईन्टरनेटहरू छन्, सुन प्रयोग गर्छन्, जस्तै कि तपाइँ सेल फोन वा कम्प्युटरमा फेला पार्न चाहानुहुन्छ। सुरु गर्न राम्रो स्थान एयरब्याग मुद्रास्फीति चिप र एन्ट लक लक ब्रेक छ। तपाईंले ताप इन्सुलेशनमा सुन पाउन सक्नुहुनेछ।
किताबहरु बाट सुन
सुन समावेश हुने पुस्तकहरू स्पेस गर्न सजिलो छ। Caspar Benson, Getty Images
के तपाईंले कहिल्यै केहि पुस्तकहरु को पृष्ठहरुमा सुन किनारों देख्नुभएको छ? त्यो वास्तविक सुनको हो। यो पुनःप्राप्त गर्न सजिलो छ, पनि, किनकि धातु सेलुलोज पेपर बनाउन प्रयोग भन्दा धेरै भारी छ।
तपाईंको पुस्तकहरू लुगामा राख्नु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरू पहिलो संस्करण होइनन्। केहि अवस्थामा, पुरानो किताबहरू उनीहरूले सहन सुन भन्दा बढी लायक छन्।
गोल्डेन ग्लासमा सुन
गोल्ड गिलासमा रातो रङ थप्न प्रयोग गरिन्छ। Sami Sami, Getty Images
रूबी वा क्रेनबेरी गिलास यसको सुनको अनुहारबाट रङमा थपियो। केही रसायन विज्ञान प्रयोग गरेर, तपाईं ग्लासबाट सुन पुन: प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो गिलास पनि यसको आफ्नै दाँयामा सङ्कलन योग्य छ, त्यसैले किताबहरूसँग, सुन पुन: प्राप्त गर्न यो स्क्रिन गर्नु अघि अस्त वस्तुको मान राम्रो छ।
ग्लास रङ को लागी प्रयुक्त तत्वहरु
सीडी वा डीभिडी बाट सुन
केही सीडी डिस्कहरूमा सुन हुन्छ। लैरी वाशबर्न, गेट छवियाँ
एक सीडी भेटियो जुन यति ठूलो लाग्दछ यो तपाईंको कान रगत वा एक घडी जसले तपाइँलाई घृणा गर्दछ वा अन्यथा यति छ कि यो फिल्मको सबै भन्दा राम्रा भागहरू स्केच गर्दछ? बरु बस यसलाई फेंकने भन्दा कम, एक मनोरञ्जन विकल्प प्लाज्मा हेर्न माइक माइक्रोवेव हो ।
चाहे तपाईँ डिस्क हटाउनुहुन्छ वा होइन, यसले वास्तविक सुन समावेश गर्न सक्दछ जुन तपाईलाई रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ। सुन डिस्क को प्रतिबिंबित सतह मा छ। केवल उच्च-अन्त डिस्कहरू सुन प्रयोग गर्छन्, जसले प्रायः उनीहरूलाई विशिष्ट रङ दिन्छ, त्यसैले यदि तपाईले सस्तोमा किन्नुभयो भने, मौकामा फरक फरक धातु हुन्छ।
यदि गहनेले वास्तविक सुन समावेश गर्दछ भने, यो स्टाम्प हुनेछ। पीटर देजले, गेट इमेज
तपाईंको उत्तम शर्त शर्त को समयमा र रिकवरी को प्रयास को लायक पर्याप्त सोने को खोज को लागि सोने को गहने को जांच को छ। अब, धेरै सुनको गहना जो सुन जस्तो देखिन्छ, र चाँदी देखा पर्ने केहि गहनाहरू धेरै सुन हुन सक्छ (यानी, सेतो सुन)। तपाईँले तिनीहरूलाई कोष्ठा र पेंडेंट भित्र र अन्य गहनाको अनुहारमा स्ट्याम्प वा गुणस्तर चिन्ह लगाउन सक्नुहुन्छ।
शुद्ध सुन 24k हुनेछ, तर गहनामा प्रयोगको लागि नरम हुन्छ। तपाईंले 18k सुन पाउन सक्नुहुनेछ, जुन रंगमा "सुन" धेरै हुनेछ। अन्य सामान्य चिन्हहरू 14k र 10 के छन्। यदि तपाईंले 14k GF देख्नुहुन्छ भने, यसको अर्थमा आधार आधारमा 14k सुनको कोटिंग छ। जबकि यो धेरै भन्दा लायक छैन, प्लेबिल गहने को एक धेरै धेरै एक महत्त्वपूर्ण राशि सम्म जोड्न सक्छ।
धातु सामग्रीको लागि आभूषणमा गुणस्तर चिह्न
कढाई कपडामा सुन
सुन र चाँदी दुवै थ्रेडमा सारिन्छन् र कपाल कचौरामा प्रयोग गरिन्छ। डी अगोस्टिनी / ए। वीर्गेानी, गेती छवियाँ
सुनको एक विशेषता भनेको अत्यन्त डुबाइल हो। यसको मतलब यो ठीक तार वा थ्रेडमा सारिन सकिन्छ। तपाईं कपडाहरू पाउन सक्नुहुनेछ जुन वास्तविक सुन (र चाँदीको कपाल) कपाल छ। सजावटी कपडाले पनि सुन समावेश गर्दछ।
तपाईं कसरी सोच्नुहुन्छ कि तपाईं सुनको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ र सुनको रंगको प्लास्टिक होइन? प्लास्टिक कम तापमान मा पिघ्छ। वास्तविक धातु पत्ता लगाउन अर्को तरिका हो कि सुन, अन्य धातुहरू जस्तै, थकान र ब्रेक हुनेछ। यदि तपाइँ म्याग्निङ गिलास प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले प्राय: सुनको कपालको टुक्रामा केहि तोडिएका थ्रेडहरू देख्नुहुनेछ।
डिश र फ्लैटवेयरमा सुन
चीन र चांदीका सामानहरूमा उच्च कराट सुन हुन सक्छ। Cstar55, Getty Images
धेरै राम्रो चीनको ढाँचा र केहि flatware मा वास्तविक सुन समावेश गर्दछ। कप र प्लेट को सुन रिम प्रायः 24k वा शुद्ध सुन हो, यसैले एक एकल डिशमा धेरै सुन हुन सक्दैन, मूल्य चाँडै जोड्न सक्छ। सबैभन्दा राम्रो भाग सुन स्क्रैप बन्द छ, त्यसैले जटिल रासायनिक विधि आवश्यक पर्दैन।
सामान्यतया सुनको flatware गोल्डको निचो शुद्धता हो, किनकि बर्तनहरू धेरै दण्ड लगाउँछन्, तर तिनीहरूमा सुनको अधिक मात्रा हो।
आवधिक तालिकामा इनिक्री रेडियो ट्रिजिङ
एक तत्व समूह र अवधि को बीच अंतर
सोडियम क्यान्सर तालिकामा कहाँ छ?
आवधिक तालिकाको पहिलो 20 तत्व
सुनको तालिकामा गोल्ड कहाँ छ?
कसलाई गोल्फफर रिकी फ्लोलर भनिन्छ?
घरमा बस्दा कलेजमा जाँदै हुनुहुन्छ?
मंगोभर्न (ग्रे) स्नपर को लागी मत्स्य पालन युक्तिहरू
पीटर वेबर बोलर प्रोफाइल
1968 को राष्ट्रपति चुनाव
10 स्पेनिश भाषा भाषा चलचित्र तपाईं Netflix मा हेर्न सक्नुहुन्छ
तपाईंको सब्जिङ प्रिन्टबुलहरू खाओ
शीर्ष योग्य तर Unsung आर र बी '80s को कलाकारहरु
योना 4: बाइबल अध्याय सारांश
फ्रान्सेली अभिव्यक्ति कसरी प्रयोग गर्ने? Allons-y "
1974 फोर्ड मस्तंग मोडेल साल प्रोफाइल
आरपीआई जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
अरिमिताका यूसुफ को थिए?
5 चीजहरू तपाईंले महाराष्ट्र तितली माइग्रेशनको बारेमा थाहा थिएन
यो अभिव्यक्तिको उपनाम सिक्नुहोस् "रोबर्टका छोरा"
Cuanoto cuesta renovar la green card, cómo hacerlo y cuándo
एन्जिल्स को हुन्?